Serge Marshennikov dia manosika ny vehivavy amin'ny hosodoko diloilo tsirairay | Famoronana an-tserasera
Manainga ny endrika vehivavy ary misolo tena azy amin'ny famirapiratany menaka rehetra dia zavatra tsy mora azo. Mila teknika be dia be izany raha toa ka mankany amin'ny hyperrealism ary te-hanala ny lamba canvas ireo fihetsika saika toa zakaina amin'ny alàlan'io fandriana io miaraka amin'ny ketrona sy mivalona, ​​araka ny hitantsika amin'ny asan'ny fandriana Serge Marshennikov.
Miantso anay i Marshennikov hiantso azy amin'izany fandalinana ny vatan'ny vehivavy sy ireo fanao isan'andro izay afaka mamela ny tena mbola saika tsy mipipy eo am-pandinihana ny antsipiriany tsirairay avy. Misongadina amin'ny endrika kanto indrindra ilay vehivavy miaraka amin'ny sary hosodoko an'ity artista Rosiana nahavita ny fifehezana azy tao amin'ny fireneny ity.
Serge nanohy ny azy fanabeazana amin'ny iray amin'ireo akademia kanto malaza indrindra an'izao tontolo izao, ny Saint Petersburg Academy of Fine Arts any Russia. Mpaka hosodoko iray izay efa nahazo loka imbetsaka ary voatendry ho "Top 30" an'ny Portrait Society of America tamin'ny 2008.
Su miteny ho azy ny hosodoko ary ireo sarin-tarehin-tsolika vehivavy marefo ireo dia mitondra antsika amin'ny fifehezana lehibe amin'ny lafiny rehetra.
Sombin-javakanto sy canvas artista tsy hita isa izay natokan'i Marshennikov ho an'ny vehivavy mampiseho ny fitiavany handrovitra ny maha-vehivavy eto an-tany mba hitondra izany any amin'ireo fitoeram-bolany amin'ny alàlan'ny tànany sy ireo fanomezany miloko.
Maro amin'ireo sary mihetsika no miaraka amin'ny maodelin'izy ireo matory sy mandry ao amin'io fitsaharana io saika mandrakizay.
Mpanoratra izay manana amidy amin'ny lavanty malaza indrindra an'izao tontolo izao toa an'i Christie sy Bonham.
La rivo-piainana izay nalaina avy amin'ny sariny tena mahavariana ihany koa.
Ianao dia afaka araho ny asanao avy amin'ny Facebook.
Mpanakanto hafa manaja Ilay vehivavy ny Vincent Romero y Pang Maokun amin'ny endriny samy hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny hatsaran-tarehy sy zava-matsiro an'ny vehivavy amin'ny hosodoko menaka manetriketrika an'i Serge Marshennikov